Shir nabadeed oo lagu soo gabagabeeyay Qoryooley | BBC Somali
Arbaca, 04.09.2002 - 15:17 Wakhtiga London
Shir nabadeed oo lagu soo gabagabeeyay Qoryooley
Waxaa maanta magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu soo gunaanaday heshiis ballaaran oo la dhex dhigay labo beelood oo halkaasi ku dagaallamaysay ilaa bishii Febraayo ee innaga tagtay.
Sida ay weriyeheenna Xasan Barise u sheegeen duqeyda dhaqanka ee beelahaasi waxaa uu muddo 15 cisho ahi wada hadal u socday labada beelood oo dagaalkoodu ay ku gubteen 12 tuulo oo gobolkaasi ka tirsan gaar ahaanna degmooyinka Qoryooley iyo Kurtunwaarrey.
Suldaan Maxamed Xaaji Cumar Tarashow iyo Suldaan Sheekh Aabow Maxamed Nuur ayaa labada dhinac midkood hoggaaminayey, halka dhinaca kalena uu u madax ahaa guddigooda wada xaajoodka Suldaan Xasanow Caliyow Ibrow oo loo yaqaanno Suldaan Furuqle.
Waxaana heshiiskan oo la soo ebyey loo xilsaaray dabagalkiisa toddoba xubnood oo labada beelood ee dagaallantay uu midba labo xubnood ku leeyahay iyo saddex xubnood oo beelaha Samaale ah oo dhexdhexaadiyaney.
Sida laga soo xigtay guddoomiyaha guddiga dhexdhexaadinta, Ugas Xaaji Xasan Ibraahim Dhaayow oo loo yaqaanno Ugaas Bantuukh waxa ay guddigani u xilsaaran yihiin soo eegidda xaaladda tuulooyinkaasi iyo ilaalinti ciddii mar dambe xad gudub sameysa.
Madaxda dhaqanku waxay mahadnaq ballaaran u jeediyeen hay’adaha COSV iyo CEFA oo ka hawlgala gobolkaasi iyo weliba Faadumo Cumar oo madax u ah ururka haweenka IIDA ee magaaladaasi dadaalkii dheeriga ahaa ee ay sameysay xagga nabad-raadinta.
Dagaalkan waxaa ka dhashay barakac aad u baahsan oo ku yimid dad badan oo gaar ahaan aad u tabar yar dhaqaale ahaan oo beeraley u badan.
Duqeydani nabaddoonnada ahi waxay hadda ku taamayaan sidii ay dib u dejin ugu sameyn lahaayeen tuulooyinkaasi dadkii ka barakacay iyagoo kaashanaya ciddii wax u awoodi karta dadkaasi dhibaateysan, laakiin duqeydu waxay xaggooda sheegeen in ay xoogga saarayaan in aanu dagaal dambe halkaasi ku soo noqon.